China Oxygen Concentrator ANGEL-5S orinasa sy mpanamboatra | AngelBiss
ANGELBISS, Ny voalohany mifantoka amin'ny fiovan'ny oxygen concentrator, ny voalohany CAN CAN mifehy ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro ao anatin'ny 0,1%.
ANGEL5S andian-dahatsoratra dia iray amin'ireo mpiorina oxygen 5L azo entina miaraka amin'ny rafitra fanairana feno indrindra, famantarana ny lesoka marina ary ny fampandehanana fiarovana azo antoka indrindra eny an-tsena. Nandalo ny fanamarinana CE sy ISO13485.
1.A Touch miasa singa maromaro miasa.
2.5Liter miaraka amina output madiovan'ny oksizenina 93% ± 3% ho an'ireo mpampiasa COPD
3.Fanehoana ny Fahadiovan'ny oxygen amin'ny isa (Fahamarinana 00.0%)
5.Large 6 'LED Light Asehoy ny angon-drakitra miasa rehetra
6.Niorina ora feno
1.Ny tontolo NO. Fahadiovan'ny fivoahan'ny oxygène 1 Ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro voafehy ao anatin'ny 0,1%.
Fikirana 4.Child Lock
Fiantohana 5.3 taona na 18000ora mandritra ny androm-piainany
6.Fampiasana maharitra ho an'ny faritra manodidina ny mari-pana (45ºC), haavo avo (15000 metatra).
1. A Touch miasa singa maro-miasa.
2. 5Liter miaraka amin'ny 93%±Vokatry ny fahadiovana oksizena 3% ho an'ny mpampiasa COPD
3. Fahadiovan'ny oksizenina amin'ny isa (Fahamarinana 00.0%)
5. Jiro LED lehibe 6 'Asehoy ny angon-drakitra miasa rehetra
6. Nahangona ora mihazakazaka tanteraka
1. Izao tontolo izao No. Fahadiovan'ny fivoahan'ny oxygène 1 Ny tahan'ny fiovan'ny toetr'andro voafehy ao anatin'ny 0,1%.
2. Ny hamandoana mavesatra mandeha ho azy dia manala ny sivana molekiola
3. Rafitra fivoahan'ny Oxygen tsy miankina & nebulizer
4. Fikirana hidin-jaza
5. Warranty 3 taona na 18000ora mandritra ny androm-piainany
6. Fampiasana maharitra amin'ny faritra iainana amin'ny hafanana ambony (45℃), haavo ambony (4500m).
Fampidirana ireo mpanentana oksizenina AngelBiss
AngelBiss Oxygen Concentrator miaraka amina fandidiana mandeha ho azy, dia afaka manome oksizenina madio madio izay mahafeno ny fenitra ara-pitsaboana ho an'ireo toeram-pitsaboana, hopitaly ary marary mila mifoka oksizenina ao an-trano.
Amin'izao fotoana izao dia olona maro no mijaly amin'ny aretim-po, havokavoka ary aretina hafa. Ny ankamaroan'ireny olona ireny dia mahazo tombony amin'ny fitsaboana oksizenina fanampiny, indrindra ho an'ireo marary COPD. AngelBiss concentrator oxygen dia afaka manome loharano oksizenina fanampiny azo antoka, mahomby ary mety indrindra ankehitriny.
Ny angôl-5 mpanentana oksizenina andiany misy fahadiovana oksizenina manomboka amin'ny 90% ka hatramin'ny 96%. Ny fikirakirana avo indrindra-Angel 5S, ao anatin'izany ny fiasan'ny nebulizer, ny asan'ny hidin-jaza, ny karazana fanairana fanaovan-tsosialy 6, ny karazana fambara famantarana lesoka 5, dia hanome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa samihafa. Vokatra lehibe izao, atoro anao hampiasaina any an-trano. Ary izahay koa dia manome modely misy bateria voafidy (ANGEL-5SB), izay afaka mihazakazaka maharitra 2 ora.
Ny andiany ANGEL-5 aza dia mety hiasa amin'ny toe-javatra amin'ny mari-pana ambony (45 ℃) sy ny fihetsika avo lenta (15000FT) .Raha any amin'ny toerana misy toerana avo ianao, dia mety aminao ny andiany ANGEL-5.
Fampiharana momba ny oxygène AngelBiss Oxygen
AngelBiss dia mitarika mpanamboatra oxygen concentrations isan-karazany miaraka amin'ny haitao mandroso PSA any Shina. AngelBiss dia hanome vahaolana samihafa arakaraka ny filàna isan-karazany amin'ny fampiharana an'ny mpanjifa.
Ho an'ny fangatahana oksizenina an'ny toeram-pitsaboana tsirairay, fianakaviana ary kely, ireo mpiorina oksizenina mikoriana kely AngelBiss dia hamaly ny fangatahan'izy ireo.
Ho an'ireo andrim-pitsaboana lehibe sy ozinina lehibe, AngelBiss dia afaka manome rafitra rafitra famatsiana oksizenina feno, izay natao, namboarina ary napetraka teo amin'ny toerana ho an'ny sehatry ny fampiharana.
Ho fanampin'ny fampiharana ara-pitsaboana, ny concentrator oxygen oxygen an'ny AngelBiss dia azo ampiharina amin'ny sehatry ny indostria koa, ao anatin'izany ny mpamokatra ozone, ny famokarana asa-vera, ny fiompiana akondro / fiompiana trondro, ny rano fanariam-pako, ny fanalefahana indostrialy, ny fisarahana azota sy ny oksiôma ary ny fampiharana hafa.
AngelBiss dia afaka manome loharano oksizenina madio madio sy mitohy ho an'ireo tranga fampiharana etsy ambony.
Previous: Masinina elektrika (siny kambana)
Manaraka: AngelBiss Medical Technology
Mpanentana oksizenina fikarakarana ao an-trano
Mpanentana oksizenina ao an-trano
Ampiasao ao an-trano ny concentrator Oxygen 5L
Fampiasana Oxygen concentrator
Mpandrindra oksizenina 5L azo havaozina miaraka amin'ny P ...